Growth Lights, Led Growth Lights, Led Lights, Plant Light - Archibald
Archibald Tech Co. , Ltd. သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး ၆ နှစ်ကြာသမိုင်းဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့် LED စက်ရုံအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များအထူးပြုသည့်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းအနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ရုံအလင်းရောင်သီအိုရီသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်များစုဆောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့ကိုပေါင်းစည်းထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တာ ၀ န်မှာ“ စက်ရုံအလင်းရောင်စွမ်းရည်ကိုမွေးမြူရန်နှင့်စက်ရုံအလင်းရောင်တွင်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်” ဖြစ်ပြီးဤရည်မှန်းချက်မှာ“ စက်ရုံအလင်းရောင်အတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ရန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခက်ခဲသောအပင်များမရှိခြင်း” ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်၊ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကိုအဓိကအဖြစ်နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများဖြစ်သည်။
AR 6000 အမြင့် LED ကြီးထွားမှုအလင်း Hydroponic ကြီးထွားလာစနစ်များကို ဦး ဆောင် panel ကအလင်းဥယျာဉ်ကိုဖန်လုံအိမ်
AR 4000 POR LED ကြီးထွားသည့်အလင်း Hydroponic ကြီးထွားမှုစနစ်များသည် panel light ဥယျာဉ်ဖန်လုံအိမ်ကို ဦး ဆောင်သည်
AR 4000 အမြင့် LED ကြီးထွားမှုအလင်း Hydroponic ကြီးထွားလာစနစ်များကို ဦး ဆောင် panel ကအလင်းဥယျာဉ်ကိုဖန်လုံအိမ်
AR 2000 အမြင့် LED ကြီးထွားမှုအလင်း Hydroponic ကြီးထွားလာစနစ်များကို ဦး ဆောင် panel ကိုအလင်းဥယျာဉ်ကိုဖန်လုံအိမ်
Lights QTY: 72pcs
640W 8 ဘား dimmable + RJ14 ဆိပ်ကမ်း
နိုင်ငံ - ဆွစ်ဇလန်၊ စိုက်ပျိုးမြေ:ရိယာ - ၁၀၀၀ စတုရန်းပေ
၎င်းသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဒေါင်လိုက်စိုက်ခင်းဖြစ်သည်။ အခန်း ၃ ခန်း၊ အခန်း ၂ ခန်းပါ ၀ င်သည်။ အခန်းတစ်ခုစီတွင် ၃၆ လုံးပါသောမီးသီးများ ၆၄၀W ဖြင့်ကြီးထွားသည်။ ၆၄၀ ဝဝပ်ပျမ်းမျှ ppfd သည် ၆ လက်မတွင်ပျမ်းမျှ PPFD ၁၀၀၂ အထိရှိသည်။
ဂိုဒေါင်ကြီးထွားမှု Proiect က
နိုင်ငံ - အမေရိကန်၊ စိုက်ပျိုးမြေGrowရိယာ - ၂၀၀၀ စတုရန်းပေ
ဤသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အခန်း ၈၀ ပါ ၀ င်သည့် pcs 640W ကို အသုံးပြု၍ warhouse တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ အလင်းလွှမ်းခြုံမှုတစ်ခုစီသည်မြင့်မားသောယူနီဖောင်း PPFD ဖြင့် ၅ လက်မ ၅ ပေရှိသည်
Lights QTY: 20pcs
800W 10 ဘား dimmable + RJ14 ဆိပ်ကမ်း
Coutry: USA, areaရိယာကြီးထွားမှု - 1000 sqt
၎င်းသည်ကြီးမားသောဒေါင်လိုက်အာကာသနှင့်အတူမိုးလုံလေလုံကြီးထွားမှုဖြစ်သည်။ 800W 10 bar ကို အသုံးပြု၍ အမိုးကြီးသောနေရာတွင်မြင့်မားစွာချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည်။ 800W သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 12inch ရှိ 1300ppfd ကျော်လွန်သည်။
Lights QTY: 96pcs
800W 10 ဘား Dimmable + RJ
ထုံးစံ - ကနေဒါ၊ စိုက်ပျိုးမှုareaရိယာ - ၂၄၀၀ စတုရန်းပေ
အခန်း ၂ ခန်းပါ ၀ င်သောအခန်းတွင်း ၄ ခု၊ ထိန်သိမ်းတစ်ခုစီ၏အလွှာ ၃ ခု၊ ထိန်ထိန်တစ်ခုစီတွင် ၂၄pcs မီးများအသုံးပြုသည်။
Lights QTY: 60pcs
640W 8 ဘားမဟုတ်သော dimmable
Coutry: Guernsey, စိုက်ပျိုးသောareaရိယာ: 1000 sqt
ဒါကမိုးလုံလေလုံဂိုဒေါင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲဆောက်ဖို့ပါ။ သိုလှောင်ရုံတွင် VEG အတွက် 5000K၊ ပန်းပွင့်အတွက် 3500K + 660nm နှင့်ကြီးထွားလာသောတဲများတွင်မိခင်အပင်များအသုံးပြုခြင်း။
1, LED စက်ရုံအလင်းပုလဲဖြန့်ဖြူး LED စက်ရုံအလင်းအတွက်အလင်းရောင်စက်ရုံအလင်းသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘာဝအပင်ကြီးထွားမှုအတွက်အသုံးပြုသည်, စံပြအခြေအနေf...
နမူနာအမှန်တကယ် LED စက်ရုံအလင်းကိုမြင့်မားသောထိရောက်မှုကို ...
အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး LED LED အလင်းသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။ LED plant light ၏လှိုင်းအလျားသည်အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
LED စက်ရုံအလင်းရောင် MOS သည်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသနည်း။
LED စက်ရုံအလင်း၏အပူလွန်ကျူးနည်းလမ်းကဘာလဲ? လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်အားလုံးကဲ့သို့ LED စက်ရုံမီးများသည်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းအပူထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
LED အစီအစဉ်၏အပူလွန်ကျူးနည်းလမ်းကဘာလဲ ...
LED မီးအလင်း၏သက်တမ်းကိုမည်သို့သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်？ ၁။ LED plant light တပ်ဆင်ခြင်း။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးတပ်ဆင်မှုလား၊ ထပ်ခါထပ်ခါ install လုပ်ခြင်းလား။
LED စက်ရုံ၏သက်တမ်းကိုမည်သို့သက်တမ်းတိုးရန် ...
အဘယ်ကြောင့်အနီရောင်အလင်းကိုအများအားဖြင့် LED စက်မီးများတွင်အသုံးပြုသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်အနီရောင်အလင်းကိုအများအားဖြင့် LED စက်မီးများတွင်အသုံးပြုသနည်း။ : အပင်မှအလင်းရောင်၏ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ...
အဘယ်ကြောင့်အနီရောင်အလင်းကိုအများအားဖြင့် LED စက်မီးများတွင်အသုံးပြုသနည်း။
အလင်းအရည်အသွေးကိုတိကျသောရောင်ခြည်နိမ့်သောအလင်းအရင်းအမြစ်၏ LED အရင်းအမြစ်ကြီးထွားဆီမီးခွက်အလင်းရောင်နှင့်မျက်နှာပေါ်ရှိခရမ်းချဉ်သီးများဖြင့်ပြုပြင်ထားသည်။
LED စက်ရုံ၏သက်ရောက်မှုသည်ကြီးထွားမှုအပေါ် ...
1. မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ကြွယ်ဝသောအရောင်များ။ လက်ရှိ LEDs များသည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုရောင်စုံသန့်ရှင်းမှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပြီးတော့ရိုးရာရ ...